वरिष्ठ फोनले परिवारहरू जोड्दछ र तीब्र कम्पनीहरूको साथ मद्दत गर्दछ Konnekt
युके परिवार अनुहार देखि अनुहार जोड्दछ
कुनै टिप्पणी 24 / 06 / 2019 यूहन्ना
भिडियोफोनले यूके परिवारलाई जोड्दछ, कम्पनको साथ मद्दत गर्दछ
हजुरआमा उनको 85 आउँदैछth सेप्टेम्बरमा जन्मदिन।
अब एक्लै बस्छ
उनी एक्लै बस्छिन् किनभने उनको श्रीमान् क्यान्सर (4 वर्ष) संग लामो लडाई पछि वर्ष 20 वर्ष पछि मरे।
पछिल्ला वर्षहरुमा, अस्पताल अस्पताल को लागी धेरै यात्रा थियो र उनी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न व्यस्त थियो; उनको आफ्नै स्वास्थ्य समस्याहरु बिर्सनु छैन; एक बढ्दो गम्भीर हातको कम्पनको विकासको साथ, गठिया, र एक आँखामा नराम्रो दृष्टि।
एक गम्भीर गिरावट2वर्ष पहिले लगभग उनको मार्यो - त्यसैले जीवन धेरै रमाईलो छैन र उनी जान्न सक्छन् उनी कमजोर छ र सामना गर्न सक्षम छ। उनी> 50 वर्षको परिवार घरमा बस्न चाहन्छिन। तथ्य यो हो कि, उनी एक्लो समयको 95% छन् र मानिसहरूलाई सहयोगको लागि सोधेर प्रतिरोध गर्छिन् र वास्तवमा आफूलाई अलग गरिरहेछन्। उनी विरलै साताको एक हप्ता र आइतवार डिनरमा खाजा क्लब बाहेक बाहिर जान्छन्, जसले उनलाई प्रेरणा दिन केही हाइलाइटहरूको साथ दोहोर्याइएको साप्ताहिक तालिका सेट गर्दछ।
उनी केहि पठन गर्छिन्, यद्यपि मुख्यतया टेलिभिजन हेर्दछन् र सधै रेडियो उनको "कम्पनी" मा राख्छिन्।
विगत2बर्षमा टेलिभिजनमा नियन्त्रण र आईप्याडको प्रयोग जस्ता प्राविधिक चीजहरूको लागि उनको मेमोरी उनको लागि धेरै गाह्रो भएको छ र रिमोट कन्ट्रोलहरूमा गलत बटन थिचेर उनी टेक्निकल चीजहरू 'गडबड' गर्ने डरले छिन्। अब यो भिडियोफोनको मामला होईन; यद्यपि यो महसुस गर्न उनको केहि समय लाग्यो, अब उनी पानीको लागि बत्तु जस्तो छ।
हजुरआमा (बायाँबाट दोस्रो) का चार बच्चा / परिवार र 11 नातीनातिना छन्।
नयाँ महान नातिनातिना पहिलो पल्ट हेर्नुभयो
उनको पहिलो महान नाति पछिल्लो अगस्त संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म भएको थियो। उनी यति टाढा यात्रा गर्न असमर्थ छिन्, यसैले अझसम्म उनले उनलाई वास्तविक जीवनमा देखिनन्। तस्विरहरू, भिडियोहरू र अब भिडियोफोनले उनको लागि जति सक्दो लामो समयसम्म नयाँ लीज ल्याएको छ।
जब उनी हाम्री छोरीहरु मध्ये एकबाट आएकी थिइन् म म उपस्थित थिएँ। उनको अनुहार र उनको व्यवहार मा अभिव्यक्ति अमूल्य थिए,6महिना को लागि आफ्नो नातिनी देखेका छैनन्। उनले युरोपमा आफ्ना भाइ र उनकी छोरीसँग एक घण्टाभन्दा बढी कुरा गरेकोमा मसँग खुशी छिन। लामो र सस्तो क्याच-अप हुनु राम्रो थियो। उनले मलाई भने कि यो सबै उनीहरूसँगै एकै कोठामा थिए!
व्यस्त परिवार अब जडान
प्रत्येक परिवारको आफ्नै व्यवसाय र पारिवारिक प्रतिबद्धता हुन्छ। कोही पनि 1-2 घण्टा ड्राईभ बिना भ्रमण गर्न पर्याप्त नजिक छैनन्, त्यसैले त्यहाँ प्राय जसो आफूलाई चाहिएको जस्तो गर्न सक्षम हुनेछ।
यो उपकरण भएकोले टाढा-टाढा परिवारका सदस्यहरूसँग उनको पुन: जडान भयो। उनी ब्रिटेनमा पहिलो भएकीमा खुशी भएकी छिन् जसले परिवारलाई आफ्नो बस्ने स्थानमा ल्याउने यो सजिलो तरिकाको उपयोग गर्न सक्दछ।
उनको आईप्याड ट्याब्लेट भन्दा धेरै सजिलो
विगतमा संचार ज्यादातर फोन द्वारा थियो, र केहि समयको लागि अनुहार समय। आईप्याडको प्रयोग उनको लागि धेरै जटिल भयो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने याद नगरिकन। उनको मिलाउने हात अब आईप्याड टच स्क्रीन सही प्रयोगको साथ एक प्रमुख मुद्दा हो; चिठी लेख्ने, जन्मदिन कार्डमा हस्ताक्षर पनि अब विगतको कुरा हो - कल उनको लागि धेरै सजिलो छ।
हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, तथ्य यो छ कि हामी जहाँ भए पनि, उनलाई कल गर्न सजिलो (र यसको विपरित) चाहे यो हाम्रो फोन, आईप्याड वा कम्प्युटरमा होस्, उनी केवल छुने दूरी भित्र छन्। यसले त्यो समस्याग्रस्त प्रश्न र भावनालाई कम गर्यो, "मलाई आशा छ कि ऊ ठीकठाक छ?" नियमित कलहरूको साथमा हामी उनलाई भेट्न जान्छौं, एक दिन बाहिर नहेरीकन उनलाई भेट्न जान्छौं।
अब एक्लो एक्लो
यद्यपि उनी स्वतन्त्र रूपले बाँचिरहेकी छन्, उनको मानसिक स्वास्थ्य बढ्दो चिन्ताको विषय हो, यद्यपि उनले यसलाई साँचो ब्रिटिश शैलीमा "म ठीक छु" भन्दै भन्छन जब वास्तविकतामा यो केस भन्दा टाढा छ। उनी स्पष्ट रूपमा धेरै एक्लो छिन् र कुनै सल्लाह वा सुझावहरूको प्रतिरोध गर्छन् कि कसरी उनले धेरै समय महसुस गर्ने घोर एक्लोपन कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।
सफाई दिनको पन्ध्रौं पटक आउँदछ, एक सामयिक मालीले बगैचालाई व्यवस्थित राख्दछ, र छिमेकीहरूले साना सामान किनमेलमा मद्दत गर्छन्। निस्सन्देह, त्यो परिवार जस्तै छैन।
फेरि आत्मविश्वास पाएकी कि उनी टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न सक्छिन् मतलब उनी धेरै कम एक्लो महसुस भएको छ। साथै उनलाई थाहा छ त्यहाँ कुनै मुद्दा छैन जस्तो कि उनी, एकल टचको साथ, परिवारको सदस्यलाई मद्दत प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्न सक्दछन्।
पढ्नुहोस् जेफलाई भिडियोफोनको बारेमा के मनपर्दछ र अरूले के भनिरहेछन्।
सम्पर्क Konnekt भिडियोफोनको बारेमा सिक्न।
यहाँ सदस्यता लिनुहोस् हेरचाहकर्ता / परिवारहरूको लागि सहयोगी जानकारी प्राप्त गर्न।
अघिल्लो पोस्ट लगभग अन्धो ब्रिटेन वरिष्ठ परिवारमा जडान गर्दछ अर्को पोस्ट मेमोरी नोक्सन प्रबन्धन गर्दै